Fuyang Bestop Kunze Uye Export Ltd. inosimbiswa muna 2011 iine makore anopfuura gumi achiburitsa zviitiko. Isu tiri piyona wekusimbisa maChinese mahebhu anobata esp yekutengesa echinyakare mushonga wemakwenzi kune pasirese pasirese. ...
Scorpion ndeyePinggan Xifeng mushonga, uyo unopinza mukuravira, wakapfava mune zvakasikwa, zvine chepfu uye ndewechiropa meridian. Iyo ine mhedzisiro yekubvisa mhepo uye kupaza, kudhirowa macolorata uye kudzikamisa marwadzo, kurwisa chepfu nekuparadzira pfumo. Scorpion inyowani ...
Tangerine chibereko chakajairika muhupenyu hwezuva nezuva, vanhu vanogara vachifarira kuravira kwadzo uye kupenya kunoonekera, asi isu tinogara tichirasa mapepa acho mushure mekuanakidzwa. Muchokwadi, idongo, pano rega nditaure zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro ye tangerine peel. Tangerine peels inogona kuchengetwa ...